समुदायस्तरमा फैलिएको सङ्क्रमणले कैलालीमा भयावह स्थिति
मुख्य पृष्ठसमाचार सुदूरपश्चिम स्वास्थ्यसमुदायस्तरमा फैलिएको सङ्क्रमणले कैलालीमा भयावह स्थिति
कैलाली / समुदायस्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि कैलालीमा स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिँदा उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा शनिबार थप दुई सय ४१ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रयोगशालामा पाँच सय ५२ नमूना परीक्षण गर्दा दुई सय ४१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी दीलिपकुमार श्रेष्ठका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये कैलालीको धनगढीका मात्रै एक सय १३ जना रहेका छन् । यस्तै धनगढीबाहेक कैलालीका अन्य पालिकाका ९१ र अन्य जिल्लाका ३७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ हजार सात सय १५ पुगेको छ । प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण १०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । तीमध्ये सेती अस्पतालमा ५९ कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
उपचार भइरहेकामध्ये तीन जना भेन्टिलेटरमा, १७ आइसियूमा र ३४ अक्सिजन सपोर्टमा उपचाररत छन् । यता टीकापुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित र लक्षण देखिएका नौ जनाको उपचार भइरहेको छ । उपचाररत रहेका पाँच कोरोना सङ्क्रमित र चार परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी रहेकाहरूको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचार भइरहेकामध्ये छ जनामा अक्सिजनको कमी भई अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टीकापुर अस्पतालमा दैनिक १० देखि २० जनासम्म कोभिड लक्षण भएकाहरु उपचारमा आउने गरेका डा. रमेश उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘लक्षण देखिएका तर जटिल समस्या नभएकालाई होम आइसोलेसनमा बस्न भनेका छौँ, जटिल समस्या भएका, श्वासप्रश्वासमा समस्या भई अक्सिजन कमी भएकालाई यहाँ अक्सिजन दिई उपचार गरिरहेका छौँ,’ डा. उपाध्यायले भने, ’कोरोना लक्षण देखिएका सबैलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न सम्भव छैन ।’
टीकापुर अस्पतालमा जनशक्ति अभाव भएकाले अस्पतालले कर्मचारी भर्नाका लागि सूचनासमेत गरेको छ । अस्पतालले दुई चिकित्सक, १५ स्टाफ नर्स, दुई हेल्थ असिस्टेन्ट र पाँच अनमी र अहेवका लागि दरखास्त खोलेको छ । रासस
कैलाली भयावह सङ्क्रमण